मुख्य समाचार Archives - Page 197 of 280 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काठमाडौं, २२ मंसिर । सुरुवातमा अग्रता लिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चितवनमा पछि परेका छन् । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डलार्इ कांग्रेसकाे समर्थन पाएका राप्रपाका विक्रम पाण्डले पछाडि पारेका हुन् । पछिल्लो परिणाामअनुसार उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी राप्रपा प्रजातान्त्रिककका नेता विक्रम पाण्डेभन्दा १४५ मतले पछि छन् । […]
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनाव बहिष्कार मात्र होइन, यसको खारेजी गर्ने निर्णय आठौँ ऐतिहासिक महाधिवेशनमा गरेको थियो । हाम्रो पार्टीले समस्त क्षेत्रमा यो निर्णयको वैज्ञानिक औचित्य, त्यसको कार्यान्वयनको ऐतिहासिक आवश्यकता र नयाँ राजनैतिक विकल्पको बारेमा जानकारी गराउँदै र त्यो चुनाव खारेजका लागि आम जनतामा अपिल गर्दै आएको थियो । हामी चाहन्थ्यौँ कि देशमा जनताको जनतन्त्रको […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १५:३६ December 8, 2017 Nonstop Khabar
चितवन, २२ मंसिर । वामगठबन्धनका प्रमुख नेता तथा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा सुरुदेखि नै अग्रता लिएका छन् । चितवन-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका प्रचण्डकाे सुरुवातदेखि नै अग्रता अाएपछि वामगठबन्धनका कार्यकर्ताहरु खुसी देखिएका छन् । उनीहरुले याे अग्रता कायमै रहने दावी गरेका छन् । मतपरिणाम अनुसार वाम गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले अग्रता लिएका […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:४३ December 8, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २२ मंसिर । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ को प्रारम्भिक मतपरिणम सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराईले सुरुआती अग्रता लिएका छन् । राजनले १ हजार २ सय ३९ मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार गगन थापाले १ हजार ४१ मत ल्याएका छन् । विवेकशील साझा पार्टीकी उम्मेदवार सुबुना बस्नेतले […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:३६ December 8, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २२ मंसिर। बिहीबार सम्पन्न काठमाडाैंकाे निर्वाचनकाे प्रारम्भिक परिणाम अाउन सुरु गरेका छन् । काठमाडाैमा सबैभन्दा बढी ध्यान तानेकाे छ १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रले । प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार काठमाडाैं १ मा यसअघि चर्चा गरिएका कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा फड्काे हानेका रविन्द्र मिश्रकाबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेकाे छ । अहिलेसम्मकाे मत परिणाम अनुसार प्रकाशमानसिंहले […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ११:१२ December 8, 2017 Nonstop Khabar
धनगढी, २२ मंसिर । डडेल्धुरामा मतमेटिका बोकेको गाडीलाई लक्षित गरी बम विस्फोट हुँदा कर्मचारी र प्रहरीको भागाभाग परेको छ। शुक्रबार बिहान ९ः३० बजेतिर जिल्लाको पर्शुराम नगरपालिका–१२, कैनपानी भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट गराइएको हो । डडेल्धुरामा मतपेटिका संकलन गर्न नै निकै कठिन भइरहेकाे बताइएकाे छ । विस्फोटबाट बा १ झ ५५३९ नम्बरको गाडीमा सामान्य क्षति भएको […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १०:३७ December 8, 2017 Nonstop Khabar
गोरखा, २२ मंसिर । गाेरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका बाबुराम भट्टरार्इले अाफ्नाे अग्रता बढाएका छन् । वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका माअाेवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाबुराम भट्टरार्इ भन्दा दुर्इ हजार मत अन्तरले पछाडि परेका छन् । यही अनुपातमा मत परिणाम अाइरहे बाबुरामले जित्ने सम्भावना देखिएकाे छ । सुरुमा भट्टरार्इभन्दा अगाडि रहेका श्रेष्ठकाे […]
काठमाडौं, २२ मंसिर । रुकुममा माअाेवादी केन्द्रले सबै पदमा विजय हासिल गर्ने भएकाे छ । नयाँ संरचना अनुसार विभाजित भइ दुर्इ जिल्ला भएकाे रुकुमका दुबै जिल्लामा माअाेवादीले एकलाैटी जित हासिल गर्ने भएकाे हाे । पूर्वी र पश्चिम रुकुम दुबैबाट प्रतिनिधि सभाका लागि माअाेवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भइसकेका छन् भने पूर्वी रुकुमकाे प्रदेश सभामा पनि माअाेवादी […]
Previous 1 … 196 197 198 … 280 Next